केपी ओलीलाई अर्को झट्का, गोजीकै नेता एकीकृत समाजवादीमा — Imandarmedia.com
केपी ओलीलाई अर्को झट्का, गोजीकै नेता एकीकृत समाजवादीमा
काठमाडौ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अर्को झट्का लागेको छ । सुदूरपश्चिममा नेकपा एमालेकी प्रदेशसभ सदस्य माया तामाङ बोहराले पनि नेकपा एकीकृत समाजवादी रोजेपछि झट्का लागेको हो ।
यसअघि एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षको भनेर चिनिएकी बोहराले सोमबार दिउँसो धनगढीस्थित निर्वाचन आयोगको प्रादेशिक कार्यालयमा पुगेर एकीकृत समाजवादी पार्टी रोजेकी हुन्।
एमाले र माओवादीको एकतापछि बनेको नेकपा र एमालेको अनौपचारिक विभाजनका बेला उनी अध्यक्ष ओलीको पक्षमा उभिदै आएकी थिइन् ।एमालेका तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षीय १७ जना प्रदेशसभा सदस्यले मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई विश्वासको मत दिदासमेत उनले विपक्षमा मतदान गरेकी थिइन् ।
तत्कालीन समयमा ओलीको पक्षमा लाग्ने यो सँगै एकीकृत समाजवादी पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यको संख्या १४ पुगेको छ भने प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल रहेको नेकपा एमाले चौथो दलमा खुम्चिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा २५ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेकोमा १४ जनाले एकीकृत समाजवादी रोजेपछि एमालेसँग अब सभामुखसहित ११ जना प्रदेशसभा सदस्य मात्र रहेका छन् ।
एमाले छाड्नेहरु लोभीपापी हुन् : ओली। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा एमाले छोड्नेहरु लोभीपापी भएको बताएका छन् । सोमबार युवा संघको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलील एमाले छोडेर अन्त जानेहरु लोभीपापी र विकाउ भएको बताएका हुन् ।
‘विकाउ मान्छे देखेर म त हैरान भएँ। मन्त्री दिन्छौ कि उता जाउँ भन्छन्, स्याल पालेर के काम लाग्छ ? स्याल पाल्यो खाली दानापानीको नास’, ओलीको टिप्पणी छ । उनले भने, ‘पार्टी छोडेकाहरु लोभीपापी हुन्।’
ओलीले अवको एमाले कसैले फोड्दा नफोडिने र भत्काउदा नभत्किने बनाउने बताए । ‘अबको एमाले तोड्दा नतोडिने, फोड्दा नपाmेडिने, भत्काउदा नभत्किने, देश बनाउने संकल्प बोकेको पार्टी हुन्छ’, ओलीको भनाइ छ
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली नागरिक मारिँदा सरकार चुइक्क बोल्न नसकेको जिकिर गरेका छन् । सोमबार युवा संघ नेपालले काठमाडौमा आयोजना गरेको भेला तथा प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले नेपाली नागरिक मारिँदा पनि सरकार चुइक्क बोल्न नसकेको बताएका हुन् । उनले नेपाली भूमिमा दशौँ हेलिकोप्टरहरू उडिरहेको तर सरकार बेखवर हुने गरेको भन्दै कटाक्ष गरे
ओलीले जयसिंह धामी प्रकरण र त्यस क्षेत्रमा भारतीय हेलिकोप्टर उडेको प्रशंक निकाल्दै सरकार जनता र देशप्रति जिम्मेवार नबनेको बताए ।‘भारत थाहा छैन भन्छ, नेपाल सरकारले थाहा दिन सक्दैन ? नागरिक मारिदा चुइक्क बोल्न सक्दैन ? अनि यहाँ सडकमा लाठी लगाउन खोज्छ युवालाई’, ओलीले भने, ‘यस्तालाई भन्छन् घरका बाघ, बनका स्याल ।’
उनले सरकारको यो भन्दा नालायकी के हुन्छ ? भन्दै प्रश्न गरे । एउटा पार्टीको सरकार भए त बोल्न सकेन भनेर चित्त बुझाउन सकिने भन्दै पाँच पाँच वटा पार्टी हुँदा पनि बोल्न नसक्नु अचम्म भएको बताए । उनले यहाँ आफ्नो नेतृत्वको सरकारका पालामा ठुलाठुला धाकधक्कु लाउनेहरु कता गए भन्दै प्रश्न समेत गरे ।
‘मास्क फुत्त फालेर, आफैले टाँसेको टेप, फिल्मी स्टाइलमा बोल्न पाइन्छ भन्थे–म अहिले तिनीहरुलाई सोध्न चाहान्छु, देश र राष्ट्रियताको बारेमा बोल्न पाइन्छ कि पाइदैन ?’, ओलीले भने,‘अश्लिल छाडा बोलेको छ, तमासा गरेको छ । अनि अहिले किन भन्न सक्दैनन् अपराधका हिस्सेदारहरुले गरेको अपराध ?’
ओलीले नेकपा एमालेलाई केही ससाना झुण्ड मिलेर, जालझेल गरेर लखेट्न खोजेपनि जनता एमालेप्रति आकर्षित भइरहेको पनि बताए । ‘नेकपा एमालेलाई केही ससाना झुण्ड मिलेर, जालझेल गरेर लखेट्न खोज्छन् । सरकारबाट एमाले हटेको छ तर जनता एमालेमा पसेको छ’, ओलीको भनाइ छ ।
उनले एमाले सरकारमा हुनु र नहुनुमा जनतालाई केही फरक नभएको भन्दै ‘फरक देशलाई पर्ने’ बताए । ‘फरक देशलाई पर्छ, विकासमा पर्छ, राष्ट्रियताको कुरामा फरक पर्छ तर जनताको भरोसामा फरक नपर्ने’ बताए । उनले देउवा नेतृत्वको सरकारले एमालेलाई गाली गरेर जिविकोपार्जन गरिरहेको पनि आरोप लगाए।
‘सरकार बनाउन नसक्ने, एमालेलाई सत्तोसराप गरेर जिविका चलाउने, देश बनाउन नसक्ने, सार्वभौम सत्ताको रक्षा गर्न सक्छु नभन्ने,देशको भुभागमा दशौं हेलिकोप्टर आएर घुम्छन् कारण केहो ? किन हो यस्तो गरेको सोध्न पनि नसक्ने ? , अनि उहाँहरुले कसरी प्रशंसा पाउनुहुन्छ ?’ओलीको प्रश्न छ । ओलीले पार्टी सरकारबाट हटेपनि जनताको भरोसा एमालेमै रहेको उनको भनाइ छ।